Budata TxtEditor maka Windows
Ikpo okwu: Windows Asụsụ: English
Free Budata maka Windows (4.60 MB)
TxtEditor bụ otu nime ndị editọ ọzọ ị nwere ike iji ma ọ bụrụ na ike gwụrụ gị na ederede ederede ederede Notepad na kọmputa gị, ọ na-adọrọ uche ya na usoro ya dị mfe. Niburu nuche na ndị ọrụ niile enweghị mmasị ịwụnye nchịkọta ọfịs, ọ bụ netiti ihe ga-anwale ihe maka ọrụ ngwa ngwa yana ịnwere onwe ya.
Mmemme ahụ, nke nwere ike idezi na usoro TXT na nke RTF, na-achọpụta njikọ na mgbakwunye Notepad, ma nyekwa gị ohere itinye faịlụ onyonyo. Ọ bụrụ nịchọrọ, ịnwere ike itinye ozi ụbọchị na oge na-akpaghị aka na ntanetị gị. You nwere ike iche maka mmemme ahụ, nke anyị na-ezuteghị nsogbu ọ bụla noge eji ya, dị ka obere nsụgharị nke Notepad.
Ekwenyesiri m ike na ị ga-enwe ọ usingụ na iji TxtEditor na ị gaghị enwe ike iji ọkwa Notepad ọkọlọtọ ọzọ.
Ikpo okwu: Windows
Nha faịlụ: 4.60 MB
Akwụkwọ ikike: Free
Mmepụta: JD's App's
Kacha ọhụrụ na: 20-07-2021
Ngwa ndị emetụtara
Mmemme Office Ashampoo so na ngwaọrụ akwadoro maka ndị ihe omume ụlọ ọrụ ndị ọzọ na -agwụ ike na...
Office 365 bụ ụlọ Microsoft Office nke ị nwere ike iji na kọmpụta ise (PC) ma ọ bụ Mac yana ekwentị...
PDF Shaper bụ mmemme ntụgharị PDF na mmịpụta nwere interface dị mfe iji. O nwere atụmatụ bara uru...
Ebe nchekwa ihe nkiri Eric, nke a maara dị ka EMDB, bụ ihe dabara adaba maka ihe nkiri ọ bụla. Site...
Na-ekwusara mbipute nke Microsoft Office 2010, Microsoft webatara sọftụwia kachasị amasị ya na ndụ...
Infix PDF nchịkọta akụkọ na-enye gị ohere imeghe, dezie ma chekwaa dọkụmentị nụdị PDF. Site na...
Budata Google Chrome
Budata Mozilla Firefox
Budata UC Browser
Budata Tor Browser
Budata Bitdefender Antivirus
Budata Norton Antivirus
Budata Kaspersky Antivirus
Budata Avira Antivirus
Budata AVG Antivirus
Budata Avast Antivirus
Budata Hello Neighbor 2
Budata Secret Neighbor
Budata PES 2021
Budata Genshin Impact
Budata Happy Wheels
Budata Clean Master
Budata Advanced SystemCare
Budata IObit Driver Booster
Budata IObit Uninstaller
Budata PC Repair Tool
Budata AVG VPN
Budata CyberGhost VPN
Budata VPN Unlimited
Budata WhatsApp Messenger
Budata BiP Messenger
Budata Malware Hunter
Budata Emsisoft Anti-Malware
Budata 360 Total Security
Budata Ultra Adware Killer
Budata Internet Download Manager
Budata IObit Unlocker
Budata DAEMON Tools Lite
Budata GTA 5
Budata Cheat Engine
Copyright right 2021, softmedal.com. Ikike niile echekwabara. Softmedal na-enye gị ohere ibudata free pc software, android ngwa na egwuregwu. Pụrụ ịchọta ndị kasị ewu ewu na android egwuregwu na a free download n'elu ikpo okwu!